“ဒီလုပ်ငန်း(ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်း) ဟာ အင်မတန်မှအရေးက… – PVTV Myanmar
“ဒီလုပ်ငန်း(ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်း) ဟာ အင်မတန်မှအရေးက…
· 8 months ago ·40 Comments
“ဒီလုပ်ငန်း(ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်း) ဟာ အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကို အာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ ဘဝကို အာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်၊ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည် လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှရေးတို့ကို အာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းမှာဖြစ်ပါတယ်”
Like – 8.1K Share – 1185
​ေလးစာပါ ၏ ႀကိဳဆိုပါ၏ ဆရာ ​ေထာက္​ခံပါ၏
​ေထာက္​ခံပါတယ္​ ဆိုတဲ့ ပိုတယ္​
စစ္​အာဏာ႐ွင္​ ကို ​ေတာ္​လွန္​​ဖို႔ ​ေခၚအားျဖစ္​ရပီ
ခုလို ​ေခၚအားက စစ္​အာဏာ႐ွင္​ ကို ​ေတာ္​လွန္​​ရင္​းနဲ႔
လေးစာပါ ၏ ကြိုဆိုပါ၏ ဆရာ ထောက်ခံပါ၏
Si Nei Khai Paw says:
2021-05-23 at 10:35 PM
ပြောပုံဆိုပုံကိုကြည့်လိုက် ဟိုငပေါတွေနဲ့ မိုးနဲ့မြေလောက်ကွာတယ် NUG မုချအောင်မြင်မည်
Duh Bikceu says:
2021-05-23 at 10:37 PM
KyawNaing Oo says:
Aung Thu Rain says:
CRPH NUG ကိုအပြည့်ဝထောက်ခံပါတယ်
2021-05-23 at 10:43 PM
ေဇာ္ ဦး says:
Win Yadanar says:
2021-05-23 at 10:47 PM
NUG CRPH, PDF 😍😘💪💪💪💪👍👍👍👍👍
2021-05-23 at 11:00 PM
Ko A Thu says:
2021-05-23 at 11:19 PM
Mahaw Naw San says:
2021-05-24 at 12:03 AM
မင်းအောင်လှိုင်ကို ဘာရွည်ရွယ်ချက်နဲ့ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ချင်းလူမျိုးတွေက ချင်းသူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးခဲ့တာလည်း တချက်ဖြေကြည့်လေနော်
NLD အဖြဲ႔စည္းမွာကပည႐ုင္ၾကည့္ဘဲ့စစ္ေခြးေတြနဲ႔ေပါင္းတဲ့သူလိုပညာမဲ့မဟုတ္ဖူး ပညာသင္ဆိုတာ႐ွိတယ္
Ven Nanissara says:
2021-05-24 at 4:58 AM
Hello,,Dr.Lian moesakhah.How can i join you?
2021-05-24 at 6:24 AM
Thank you so much for your valuable efforts!👍👍👍👏👏🙏🙏🙏
2021-05-24 at 6:27 AM
လေးစားပါတယ် ဝန်ကြီး။ We support NUG.
Htaylwinoo Lwinoo says:
2021-05-24 at 9:55 AM
2021-05-24 at 10:18 AM
2021-05-24 at 11:03 AM
2021-05-24 at 11:45 AM
မင်္ဂလာပါဆရာ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဉပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိနေပြီးသား ဆရာတို့အပါဝင်တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေးအားပူးပေါင်းပြီး ၁၈နှစ်ကြာရေးဆွဲအတည်ပြုထားတဲ့ ကြားကာလဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဉပဒေကိုယာယီအဖြစ်အသုံးပြုလို့မရနိင်ဘူးလားဆရာ ဆရာတို့ယခုရေးဆွဲမယ့်ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဉပဒေကိုရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်အချိန် တွေအရမ်းနှောင့်နှေးသွားမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မိပါတယ်
2021-05-24 at 11:52 AM
ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး အစကတည်းကပါဝင်နိုင်တဲ့၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးသိနိုင်တဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခင်းအကျင်းဆိုတာ မြေပြင်အာဏာမတည်ဆောက်နိုင်သရွေ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း အင်တာနက်မရတဲ့ဒေသတွေနဲ့ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသကပြည်သူလူထူကိုဘယ်လိုပါဝင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာချပြပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ ဒီမိုကရေစီနည်းမကျသော အပေါ်ယံ elite တစ်စုကလုပ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေအာင္ျမင္စြာေပၚထြက္နိုင္ပါေစ 🙏
2021-05-24 at 3:47 PM
Kay Tee Di says:
2021-05-24 at 4:47 PM
လေးစားပါတယ် ဝန်ကြီး ရှင့်
2021-05-27 at 9:40 AM
NanLay NanLay says:
2021-05-27 at 5:21 PM
2021-05-29 at 7:59 PM
Sanoo San says:
2021-05-29 at 8:09 PM